Kameleoon: Injineer AI ah oo saadaaliya suurtagalnimada beddelaadda booqdaha | Martech Zone
Kameleoon waa hal madal oo loogu talagalay heerka sare u-rogidda (CRO) laga bilaabo baaritaanka A / B iyo ku-habboonaynta illaa shaqsi ahaaneed waqtiga-dhabta ah iyadoo la adeegsanayo sirdoon farsamo. Algorithms-ka barashada mashiinka ee Kameleoon ayaa xisaabiya Itimaalka badalashada booqde kasta (oo la aqoonsaday ama aan la aqoon, macaamil ama rajo) waqtiga dhabta ah, saadaalinta iibsigooda ama ujeedka kaqeybgalka.
Kameleoon Tijaabinta iyo Is-gaarsiinta Shakhsiyeed
Kameleoon waa shabakad awood badan leh tijaabinta iyo shakhsi ahaaneed madal loogu talagalay milkiilayaasha wax soo saarka dhijitaalka ah iyo suuqleyda doonaya inay kordhiyaan beddelaadyada isla markaana kexeeyaan kobaca dakhliga ee internetka. Astaamaha ay ka mid yihiin baaritaanka A / B, qeybinta isticmaaleyaasha, beegsiga habdhaqanka iyo xogta waqtiga-dhabta ah, Kameleoon waxay ka caawineysaa ganacsiyada inay kordhiyaan beddelaadda khadka tooska ah iyo inay kordhiyaan dakhliga.
Forrester wuxuu wareysiyo qoto dheer la yeeshay macaamiil badan oo Kameleoon ah oo ku baahsan warshadaha oo ay ku jiraan ganacsiga elektaroonigga ah, safarka, baabuurta iyo tafaariiqda natiijooyinka la saadaaliyay.
Faa'iidooyinka Kameleoon ee la aqoonsaday muddo saddex sano ah waxaa ka mid ah:
Illaa 15% hagaajinta heerarka beddelashada adoo hagaajinaya khibrada booqdayaasha websaydhka iyo shakhsiyeynta isdhexgalka xagga hagaajinta beddelaadda. Tani waxay ka dhigan tahay faa'iido seddex sano ah oo la isku hagaajiyay oo khatar ah $ 5,056,364 qiimaha hadda jira.
Illaa 30% kororka macaamilka iibka iskutallaabta, iyadoo la adeegsanayo Kameleoon habdhaqankiisa iyo falanqeyntiisa ku saleysan macnaha ee u saamaxaya sumadaha inay kordhiyaan tirada ololeyaasha lagu kala iibsanayo ee guuleysta. Tani waxay meteleysa wadar faa'iido seddex sano ah oo la isku halleyn karo oo dhan $ 577,728.
49% hoos udhaca dadaalka dejinta ololaha. Kameleoon awooddeeda shaqsiyadeed ee AI-ku-shaqeysiinta iyo u-qoondeynta firfircoon ee taraafikada websaydhka si loogu beddelo baaldiyo jilicsan ayaa si weyn u yareynaya waqtiga loo baahan yahay in la dejiyo ololeyaal iyo qaabeynta khibradaha websaydhka iyo isdhexgalka, iyada oo la kordhinayo madax-bannaanida suuqleyda ee leh is-dhexgal macquul ah iyo is-dhexgal. Tani waxay ka dhigan tahay faa'iido dhan $ 157,898 qiimaheeda hadda seddex sano.
Intaas waxaa sii dheer, macaamiisha waxay aqoonsadeen faa'iidooyinka aan rasmiga ahayn ee soo socda:
Khibrada Macaamiisha (CX) - Kameleoon waxay awood u siineysaa gudbinta macluumaadka iyo farriimaha loogu talagalay, ururada waxay u oggolaaneysaa hay'adaha inay bixiyaan khibrad la xiriirta oo shaqsiyeed.
Kordhinta Khibradda Shaqaalaha (EX) - Isticmaalayaashu waxay dareemayaan awood badan maadaama ay sameyn karaan isbadal fudud iyo wax ka bedelida arrimaha daqiiqadaha, sidaa awgeed ay dareemayaan falcelin iyo adkaysi badan - awood badana ay ku leeyihiin shaqadooda.
Bixinta uqalma, khibrad shaqsiyeed dijitaal ah ayaa hada udub dhexaad u ah guusha ganacsiga - iyadoo faafida ay xoojineyso baahida loo qabo magacyada inay diirada saaraan tijaabinta iyo shaqsiyeynta. Daraasaddan iyo falanqaynta Forrester waxay muujinayaan sida awoodda iyo sahlanaanta adeegsiga Kameleoon ay u taageerto macaamiisha shirkadaha si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah isugu jira ah, isla markaana u keenaya ROI deg deg ah iyo faa'iidooyin dhaqaale oo muddo dheer soconaya
Jean-René Boidron, agaasimaha guud, Kameleoon
Kahor isticmaalka Kameleoon, ururada macaamiisha midkoodna ma lahan wax awood shaqsiyeed ah gabi ahaanba ama waxay adeegsadeen aaladaha tijaabada A / B oo aan lahayn matoorro saadaalin iyo goos goosnimo. Waxay dareemeen inay ka maqan yihiin awoodda kor loogu qaado heerka is-beddelka iyagoo awood u siinaya naqshadaynta khibradda websaydhka la beegsanayo.
In ka badan 450 shirkadood oo waaweyn ayaa ku tiirsan Kameleoon, taas oo ka dhigeysa meesha ugu sarreysa SaaS ee loogu talagalay shaqsiyeynta AI-wadista ee Yurub. Kuwaas waxaa ka mid ah hoggaamiyeyaasha ganacsiga iyo dukaamada (Lidl, Cdiscount, Papier), warbaahinta (Mumsnet, L'Equipe, Axel Springer), safarka (SNCF, Campanile, Accor), baabuurta (Toyota, Renault, Kia), adeegyada maaliyadeed (Axa, AG2R, Credit Agricole) iyo caafimaadka (Providence). Kameleoon waxay ku guuleysaneysaa seddex koror sanadle ah macaamiisha iyo dakhliga labadaba.
Codso Kameleoon Demo
Tags: imtixaanka abaishaqsiyeyn shaqsiyeedkala-qaybsanaanta hawadaAnalyticssirdoonka macmalItimaalka badalashadafadhikameleoonkcsshakhsi ahaaneedDuufaan
Bizzabo: Ku Karti Qofkaaga Shaqsi ahaaneed iyo Dhacdooyinkaaga Farshaxan ee Madal Hal ah